नेपालमा रहेका १३ इन्डोनेसियनलाइ नेपालीले बस्न दिएनन्, जता जाँदा पनि लखेटिएपछि प्रहरीले भ्यानमा हालेर घुमाउँदै ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपालमा रहेका १३ इन्डोनेसियनलाइ नेपालीले बस्न दिएनन्, जता जाँदा पनि लखेटिएपछि प्रहरीले भ्यानमा हालेर घुमाउँदै !
ललितपुर : धार्मिक कार्यक्रममा भाग लिन नेपाल आएका १३ जना इन्डोनेसियनलाई कतै बस्न नदिइएपछि समस्यामा परेका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरु मध्ये सात जना जनवरी २१ तारिखमा साउदी अरेबिया हुँदै काठमाडौं आएका देखिन्छन्। ६ जनाको समूह फेब्रुअरी ११ मा बैंकक हुँदै नेपाल आएका हुन्। अघिल्लो समूह फेब्रुअरी ८ मा सप्तरीको कन्चनरुप गएको देखिएको छ। पछिल्लो समूह पनि त्यहाँ पुगेर फेब्रुअरी १५ देखि १७ सम्म धार्मिक कार्यक्रम ‘इस्तीमा’ मा भाग लिएको देखिएको महानगरीय प्रहरी परीसर ललितपुरका प्रमुख टेक प्रसाद राइले बताए। नितु घलेले अन्नपूर्ण पोस्टमा यो समाचारलेखेकी छन् ।
उनीहरुलाई बुधबार सप्तरीबाट पास दिएर काठमाडौं पठाइएको थियो । माछा पोखरीस्थित मस्जिदमा बस्ने योजना भएपनि स्थानीयले बिरोध गरेपछि उनीहरुलाई प्रहरीले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका इमाडोलस्थित मस्जिद पुर्‍याएको थियो। बुधबार राति बालाजु प्रहरीले ती इन्डोनेसियनलाई इमाडोलस्थित जामे मस्जिदको शाखामा पुर्‍याएको थियो। स्थानीयले विरोध गरी त्यहाँ पनि बस्न दिएनन् ।
त्यसपछि उनीहरुलाई बिहीबार महानगरीय प्रहरी बृत्त सातदोबाटोका प्रमुख मित्रबन्धु शर्माको टोलीले गोदावरी पुर्‍याइएको थियो तर स्थानीयको दबाबपछि गोदावरीबाट पनि राति ९:३० अन्तै लगिएको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले जानकारी दिए।उनीहरुलाई गोदावरी भिलेज रिसोर्टमा क्वारेन्टाइन बनाएर राख्ने अनुमति दिएको महर्जनले बताए। उनका अनुसार उत्त भिलेज रिसोर्टमा करिब ५० जनालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।स्थानीयले उक्त ठाउँमा बस्न नदिने भन्दै तो’डफो’डमा उत्रिन खोजेको महर्जनले बताए।
उनीहरुको स्वास्थ्य जाँच गरिएको र कुनै समस्या नरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । ७० दिन पहिले नै नेपाल आएका इन्डोनेसियन नागरिकलाई संकट बेला कतै बस्न नदिदा इन्डोनेसियासँगको सम्बन्ध बिग्रन सक्ने प्रहरीको गुनासो छ। स्थानीयहरुले उनीहरुलाई बस्न नदिएर धार्मिक सहिष्णुता बिगार्ने माहोल बनाएको प्रहरीको भनाइ छ।
आज फेरि बढ्यो सुनको भाउ, चाँदीको उच्च रेकर्ड
तनावग्रस्त रानी, दर्जनौ मालबहाक सवारी साधन तोडफोड ( तस्विरहरू सहित)